समाचार - Dainik Nepal
घरायसी कामको पनि पारिश्रमिक तोक्न माग
काठमाडौं । महिलाले गर्ने घरायसी कामको पनि अन्य क्षेत्रसरह उचित पारिश्रमिक तोक्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । ‘पारिश्रमिक बिनाको सेवामुलक कार्य’ छलफलमा उनीहरुले महिलाले दैनिक झण्डै ११ घण्टा घरायसी कामकाजमा बिताए पनि पारिश्रमिक नपाउने...
कृषिमा कानुन मिचेर कनिष्ठलाई महानिर्देशक
काठमाडौं । कृषि मन्त्रालयले नियमविपरीत पाँच वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठ सहसचिव योगध्वज जोशीलाई कृषि विभागको महानिर्देशक बनाएको छ । महानिर्देशक लीलाराज पौडेलले अनिवार्य अवकाश पाएपछि रिक्त पदमा मन्त्री हरि पराजुली र सचिव जयमुकुन्द खनालले निजामती...
रमेश खरेललाई चोरको च्यालेन्ज, काठमाडौंबाट हटाउन गृहमन्त्रीलाई मिल्यो बहाना !
काठमाडौं १. महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार उप्रेती आइतबार साँझ कार्यालयबाट घर फर्कदै थिइन्, बालाजुको गंगा हल अगाडि पल्सर मोटरसाइकलमा आएका युवाहरूले सिक्री लुछेर टाप कसे । प्रहरी नै भए पनि लुटेराको...
प्रहरीको ध्यान फेसबुकमा
काठमाडौं । प्रहरी अधिकारीहरूमा प्रचारको भोक यति धेरै छ कि फेसुबुकमा फ्यानपेज समेत बनाएर उनीहरू आफ्नो बढाईचढाई हल्ला गर्न थालेका छन् । प्रहरीका केही राम्रा अधिकारीहरू समेत आफूले गरेको भन्दा धेरै फेसबुक प्रचारमा लागेका...
चुनाव हारेकालाई सभासद मनाेनित नगर्न सर्वोच्चकाे अादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधान सभा निर्वाचनमा पराजित भएकालाई मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । दलहरुबीच सभासद् मनोनयनका विषयमा छलफल जारी रहेका बेला सर्वोच्चको यो फैसला आएको हो । न्यायाधीशहरु रामकुमारप्रसाद...
अस्वस्थ्य मासु खुवाउने होटल व्यवसायी प्रहरी फन्दामा
डडेल्धुरा । डडेल्धुराको जोगबुडा गाविस लालढुङ्गा बजारमा रहेको पूर्णीमा होटेल एण्ड लजका मालिक ईश्वरी जोशी र मासु व्यापारी वीरबहादुर माललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अस्वस्थ्य मासु उपभोक्तालाई खुवाएर ठगी गरेको आरोपमा इलाका प्रहरी...
रुपन्देही तेल चोरी काण्डका आरोपी राजधानीबाट पक्राउ
काठमाडौं । रुपन्देही तेल चोरी काण्डका एक आरोपीलाई प्रहरीले राजधानीबाट पक्राउ गरेको छ । तेल चोरी काण्डका आरोपी हरिबहादुर कुँवरलाई रुपन्देहीका प्रहरी उपरीक्षक दिपक न्यौपानेको टोलीले सोमबार विहान बनस्थलीबाट पक्राउ गरेको हो । कुँबर...
खाने होइन ? छ सय वर्ष पुरानो घिउ
जुम्ला । जुम्लाको ताम्ती–५ बाह्रगाउँमा अवस्थित महादेव स्थानमा अहिलेसम्म पनि गाईको ६ सय वर्षको पुरानो घिउ तामाको गाग्रीमा राखिएको छ । कर्णालीका सांस्कृतिक तथा कुल देवीदेवताका रुपमा रहेका कालिका मालिका, नदै, लाटसित, मस्टो, भयाँर,...
प्रेस युनियनको अध्यक्षमा दवाडीको उम्मेदवारी घोषणा
काठमाडौं । नेपाल प्रेस युनियनको भावी अध्यक्षका लागि दामोदरप्रसाद दवाडीले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । युनियनका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका दवाडीले सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । युनियनको अध्यक्षमा वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष...
मनोनित सभासद्को भागबण्डामा प्रमुख तीन दलबीच विवाद
काठमाडौँ । सरकारबाट मनोनित हुने २६ सभासद्को भागबण्डामा प्रमुख तीन दलबीच फेरि विवाद भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा मनोनित सभासद्का विषयमा यसअघि भएको भागबण्डामा समेत बिमति...
सिरहामा गोली चल्यो, अहेब पनि अपहरित
लहान । सिरहाको चोहर्वा– सिरहा सडकखण्डको विष्णुपुर चोकनजिकै सोमबार बिहान ५ बजे अज्ञात समूहले गोली चलाउँदा एक सर्वसाधारण घाइते भएको छ । घाइते हुनेमा सिरहाको लक्ष्मीपुर–२ बस्ने करिब २५ वर्षीय जोगिन्द्र पासवान रहेको जिल्ला...
जाजरकोटमा युवाहरुबीच ग्याङफाइट, एकको मृत्यु, तीन घाइते
जाजरकोट । रुकुमको पुर्तिमकाँडा गाविसको छेपारेस्थित जिप काउन्टरमा भएको झडपमा परी जाजरकोट लहाँ–६ का लक्ष्मण विकको मृत्यु भएको छ । लहाँ–६ कै विवेक रावल, गणेश बोहरा र खलङ्गाका विवेक शाह गम्भीर घाइते भएका छन्...
« 1 … 6,635 6,636 6,637 6,638 6,639 … 6,670 »
काठमाडौं बाहिर जान दिने निर्णय भएको छैन : सरकार
कोरोना भाइरस : नेपाल-भारत प्रधानमन्त्रीबीच भएको एउटा सहमति यस्तो छ
कुटनीतिक नम्बरको दुरुपयोग गर्ने हिरासतमा रहेका एउटा व्यापारी
बहराइनमा दशजना नेपालीमा कोरोना भाइरसकाे सङ्क्रमण
केरा नबिकेर नदीमा बगाइयो, खाल्टो खनेर कुखुरा पुरियो, तरकारीबारीमा ट्याक्टर चलाइयो
विवादित ओम्‍नीलाई २० करोड भुक्तानी
२३ हजार कम्प्युटर किन्ने ठेक्का ओम्नी समूहलाई दिन टेन्डर सूचनासमेत संशोधन, डेढ अर्बको सामग्रीलाई साढे तीन अर्ब
सलको पिङमा अल्झिएर ६ वर्षीय बालकको मृत्यु
भायानेटको डाटा चोरी भएपछि कम्पनीद्वारा ग्राहकमा यस्ताे अपील
४ थान भरुवा बन्दुकसहित एक पक्राउ
किन नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण कम छ ? यस्ता छन् पाँच सम्भावित कारण
साढे २२ हजारसहित ८ जना जुवातास खेल्ने पक्राउ
वडाअध्यक्ष पटेलद्धारा ज्यालादारी तथा विपन्नलाई राहत वितरण